Myanmar Dictionary :: tonight
(adj) သိမြင်သော။ အသိအမှတ် ပြုသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
(noun) လက်။ တိရစ္ဆာန်ရှေ့ခြေ။ လက်ကဲ့သို့ ညွှန်ပြသောအရာ။ လက်တံ။ လက်တစ်ဝါး။ ကိုယ်စားလှယ်။ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ သြဇာအာဏာ။ အုပ်ထိန်းခြင်း။ ကျွမ်းကျင်မှု။ လက်ရှိဖြစ်ခြင်း။ လက်ရေး။ လက်သား။ ဘက်။
(v.i) လက်နှင့်ပေးသည်။ လက်နှင့်တွဲ၍ ခေါ်ငင်သည်။ ရွက်လိပ်သည်။ လက်တွဲသွားသည်။ hand-in-hand ညီညွတ်စွာ။ ညီညီညွတ်ညွတ်။ hand-down ဆက်ခံစေရန် လွှဲပေး-ချပေး-သည်။ hand off! မကိုင်မတွယ်နှင့်။ ဝေးဝေးနေ။ hands up! လက်မြှောက်လိုက်။ hand to hand အနီးကပ်။ လက်တစ်လှမ်း။ from hand to mouth ရရစားစား။ at second hand တဆင့်ခံ။ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ။
(v.t) လက်နှင့်ပေးသည်။ လက်နှင့်တွဲ၍ ခေါ်ငင်သည်။ ရွက်လိပ်သည်။ လက်တွဲသွားသည်။ hand-in-hand ညီညွတ်စွာ။ ညီညီညွတ်ညွတ်။ hand-down ဆက်ခံစေရန် လွှဲပေး-ချပေး-သည်။ hand off! မကိုင်မတွယ်နှင့်။ ဝေးဝေးနေ။ hands up! လက်မြှောက်လိုက်။ hand to hand အနီးကပ်။ လက်တစ်လှမ်း။ from hand to mouth ရရစားစား။ at second hand တဆင့်ခံ။ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ။
(noun) သစ်ပင်ထွက် အစေးဖြူ။ သစ်စေးဖြူ။
(noun) အာရုံကြော။ အချက်အချာ။ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံရှိခြင်း။ သစ်ရွက်ရှိအကြား။